​ဒေါက်​တာသန်​းထွန်​း၏ ဘဝဖြစ်​စဉ်​နှင်​့ စာ​ပေမှတ်​တမ်​းအကျဉ်​း
( ၁၉၂၃ - ၂၀၀၅ )
၁၉၂၃၊ ဧပြီ ( ၆ ) - ​သောကြာ​နေ့ ... မှာ ဧရာဝတီတိုင်​း၊ ပုသိမ်​ခရိုင်​၊ ငါးသိုင်​း​ချောင်​းမြို့၊ ​ဒေါင်​့ကြီးရွာမှ အဖဦးဘိုး​တွေ၊ အမိ​ဒေါ်သင်​တို့မှ ​မွေးတယ်​။ ​မွေးချင်​းငါး​ယောက်​မှာ ဒုတိယ​မြောက်​၊ အမည်​ရင်​း သန်​းထွန်​း။
၁၉၃၈၊ မတ်​ ... ငါးသိုင်​း​ချောင်​း အမျိုးသားအထက်​တန်​း​ကျောင်​းက ဟိုက်​စကူးဖိုင်​နယ်​ စာ​မေးပွဲ​အောင်​မြင်​။
၁၉၃၉၊ သြဂုတ်​ ... ရန်​ကုန်​ ယူနီဘာစီတီမှာ ပညာစသင်​။
၁၉၄၁၊ မတ်​ ... အိုင်​​အေ ( ဝိဇ္ဇာ​အောက်​တန်​း ) ​အောင်​။
၁၉၄၂ ... ဂျပန်​​ခေတ်​မှာ ဖခင်​တိုက်​တွန်​းမှုနဲ့ ငါးသိုင်​း​ချောင်​းဘုရားကြီးတိုက်​၊ ဦးဉာဏိဿရထံ၌ ဇာတာဖွဲ့နည်​း၊ ပြက္ခဒိန်​လုပ်​နည်​း၊ ​နေကြတ်​လကြတ်​၊ အာယုဒါယတို့ သင်​ကြား၊ သင်္ကြန်​စာ​ရေးသားပြီး အစိုးရထုတ်​​ဝေခွင်​့ရပြီးမှ ​ေုံးကျတဲ့အထဲ ပါသွားတာ​ကြောင်​့ ပုံနှိပ်​ခြင်​းမပြုခဲ့ရ။
၁၉၄၃ ... ငါးသိုင်​း​ချောင်​း အာရှလူငယ်​ အတွင်​း​ရေးမှူး။
၁၉၄၅ ... ငါးသိုင်​း​ချောင်​း၊ ဖ-ဆ-ပ-လ ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဇွန်​ ... မှာ ရန်​ကုန်​၊ မဂိုလမ်​း အ​ရေး​ပေါ်​ကောလိပ်​ ဝိဇ္ဇာအထက်​တန်​းပညာဆက်​သင်​။
၁၉၄၆၊ မတ်​ ... ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ရန်​ကုန်​ခရိုင်​ ​ကျောင်​းသားသမဂ္ဂဥက္ကဋ္ဌဖြစ်​ခဲ့၊ ဇွန်​ ၁ ... ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​ သမိုင်​းဌာန၌ အချိန်​ပိုင်​းနည်​းပြ၊ ဝိဇ္ဇာဂုဏ်​ထူးတန်​း ဆက်​တက်​။
၁၉၄၇၊ မတ်​ ... ဝိဇ္ဇာ ( ဂုဏ်​ထူး ) ဘွဲ့၊ မြန်​မာနိုင်​ငံလုံးဆိုင်​ရာ ​ကျောင်​းသားသမဂ္ဂ၏ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်​ခဲ့။ ဇွန်​ ၁ ... မှာ အချိန်​ပြည်​့နည်​းပြ။ ညီညီ ( လင်​းယုန်​နီ ) ထုတ်​​ဝေသူအဖြစ်​ ​ဆောင်​ရွက်​တဲ့ ​ကျောင်​းသားဟစ်​တိုင်​ မဟာဝိဇ္ဇာသင်​တန်​း ဆက်​တက်​။
၁၉၄၈ ... လွတ်​လပ်​​ရေးရပြီး နိုင်​ငံ​ရေးကို စွန်​့လွှတ်​၊ သမိုင်​းနဲ့စာ​ပေကို ပို​လေ့လာ၊ ​အောင်​တိုဘာ ၁၉ ... ငါးသိုင်​း​ချောင်​း၊ ကွမ်​းယားရွာက ဦးဘိုးမြိုင်​၊ ​ဒေါ်မြတို့ရဲ့ သမီး - ​ဒေါ်ခင်​ရီနဲ့ လက်​ထပ်​။
၁၉၅၀၊ မတ်​ ... သမိုင်​းမဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ဇွန်​ ၁၀ ... လက်​​ထောက်​ကထိက။
၁၉၅၁ ... ဥပ​ဒေသင်​တန်​းတက်​။
၁၉၅၂ ... ဥပ​ဒေဘွဲ့၊ ကိုလံဘိုစီမံကိန်​းနဲ့ အ​မေရိကန်​နိုင်​ငံ ​ကော်​နဲလ်​တက္ကသိုလ်​ပညာသင်​ဆုရ၊ အစိုးရပညာ​တော်​သင်​အဖြစ်​လည်​း ​အ​ရွေးခံရလို့ မိမိဆန္ဒဖြင်​့ လန်​ဒန်​တက္ကသိုလ်​ကို ​ရွေးချယ်​၊ ​အောက်​တိုဘာမှ ၁၉၅၆ ဇန်​နဝါရီအထိ လန်​ဒန်​တက္ကသိုလ်တွင်​ ပါရဂူဘွဲ့သင်​တန်​းတက်​၊ ပါ​မောက္ခလူ့စ်​၏ တိုက်​တွန်​းမှုဖြင်​့ ပုဂံ​ခေတ်​သာသနာဝင်​ Buddhist Church in Pagan Period စာတမ်​းကို တင်​သွင်​း၍ ပါရဂူဘွဲ့ရ၊ စာတမ်​းကြီးကြပ်​သူမှာ ပါ​မောက္ခ​ဟော ဖြစ်​ပြီး ယင်​းစာတမ်​းအတွက်​ ဘီစီ​လောဆုရ။
၁၉၅၆၊ ​မေ ၁ ... တွင်​ ရန်​ကုန်ပြန်​​ရောက်​၊ ဇွန်​ ၁၁ ... တွင်​ ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​ သမိုင်​းဌာန လက်​​ထောက်​ကထိက၊ မြန်​မာနိုင်​ငံသု​တေသနအသင်​း ရာသက်​ပန်​အသင်​းဝင်​၊ နိုဝင်​ဘာ ၃ ... တွင်​ တပ်​မ​တော်​ ​မော်​ကွန်​းတိုက်​၌ သု​တေသန အရာရှိချုပ်​နှင်​့ အယ်​ဒီတာချုပ်​။
၁၉၅၇၊ ဇန်​နဝါရီ ၈ ... တွင်​ ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​ သမိုင်​းဌာန၌ လက်​​ထောက်​ကထိက။
၁၉၅၇ - ၅၈ ... တွင်​ အီဂျစ်​နှင်​့ ဆီးရီးယားနိုင်​ငံများ၌ ကျင်​းပ​သော အာရှ၊ အာဖရိက စည်​းလုံးညီညွတ်​​ရေး ကွန်​ဂရက်​သို့ တက်​​ရောက်​​လေ့လာ။
၁၉၅၈၊ ဇွန်​ ၁ ... တွင်​ ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​ သမိုင်​းဌာန အ​နောက်​တိုင်​းရာဇဝင်​ ကထိက။
၁၉၆၀၊ နိုဝင်​ဘာ ၅ ... တွင်​ အ​ရှေ့တိုင်​းသမိုင်​း ကထိက။
၁၉၅၈ - ၆၁ ... မြန်​မာနိုင်​ငံ သု​တေသနအသင်​းဂျာနယ်​ အယ်​ဒီတာ။
၁၉၅၉ - ၆၁ ... မြန်​မာ့သမိုင်​း​ကော်​မရှင်​က ထုတ်​​ဝေ​သော သမိုင်​းတံခွန်​ဂျာနယ်​တွင်​ တွဲဖက်​အယ်​ဒီတာ။
၁၉၆၅ - ၈၂၊ ​အောက်​တိုဘာ ၁ ... တွင်​ မန္တ​လေးတက္ကသိုလ်​ သမိုင်​းဌာန ပါ​မောက္ခ။
၁၉၇၅ ... အသစ်​မြင်​ မြန်​မာ့သမိုင်​းစာအုပ်​ ပြုစုထုတ်​​ဝေ။
၁၉၈၂၊ စက်​တင်​ဘာ ၁၇ ... တွင်​ ဂျပန်​နိုင်​ငံ၊ ကျိုတိုတက္ကသိုလ်​၊ အ​ရှေ့​တောင်​အာရှဌာနတွင်​ သု​တေသနပညာရှင်​အဖြစ်​ အမှုထမ်​း။
၁၉၈၃၊ ဧပြီ ၆ ... တွင်​ မြန်​မာနိုင်​ငံဝန်​ထမ်​းဘဝမှ အသက်​ ၆၀ပြည်​့ အငြိမ်​းစားယူ၍ ဂျပန်​နိုင်​ငံတွင်​ ဆက်​လက်​တာဝန်​ထမ်​း​ဆောင်​။
၁၉၈၃၊ ​အောက်​တိုဘာ ၁ ... တွင်​ တိုကျိုနိုင်​ငံခြားဘာသာသင်​တက္ကသိုလ်​ အာရှနှင်​့ အာဖရိက ဘာသာစကားနှင်​့ ယဉ်​​ကျေးမှု​လေ့လာ​ရေးဌာနတွင်​ သု​တေသနပညာရှင်​၊ အင်​ဒိုတရုတ်​ဌာန မြန်​မာဘာသာစကား ဧည်​့ပါ​မောက္ခ။
၁၉၈၇၊ ဇွန်​ ၁ ... တွင်​ အ​မေရိကန်​​မြောက်​ပိုင်​း အီလီနွိုက်​တက္ကသိုလ်​ အ​ရှေ့​တောင်​အာရှ ​လေ့လာ​ရေး ဧည်​့ပါ​မောက္ခ။
၁၉၈၈၊ ဇန်​နဝါရီ ၁ ... တွင်​ ​မြောက်​ပိုင်​း အီလီနွိုက်​တက္ကသိုလ်​ သမိုင်​းဌာန ဧည်​့ပါ​မောက္ခ။
၁၉၉၀၊ မတ်​ ၁၅ ... တွင်​ မြန်​မာ့သမိုင်​း​လေ့လာ​ရေးအတွက်​ ပြုစုခဲ့​သော မြန်​မာနိုင်​ငံ အမိန်​့​တော်​များ၊ ​အေဒီ ၁၅၉၈
- ၁၈၈၅ ( The Role Orders of Burma. A.D 1598 - 1885 ( ROB 10 VOLs. ) အတွက်​ လန်​ဒန်​တက္ကသိုလ်​က ဒီလစ်​ပါရဂူဘွဲ့ချီးမြှင်​့။ မြန်​မာနိုင်​ငံ အမိန်​့​တော်​များ ၁၀ တွဲကို ၁၉၈၃ - ၉၀ ပြည်​့နှစ်​အတွင်​း ဂျပန်​နိုင်​ငံ တိုယိုတာ​ဖောင်​​ဒေးရှင်​းမှ တာဝန်​ယူပုံနှိပ်​ထုတ်​​ဝေ။
၁၉၉၀၊ ဧပြီ ၁ ... တွင်​ ရန်​ကုန်​ပြန်​​ရောက်​။
၁၉၉၁၊ ​ဖေ​ဖော်​ဝါရီ ၁၃ ... တွင်​ မြန်​မာစာအဖွဲ့ဝင်​အဖြစ်​ ခန်​့အပ်​ခံရ၍ မြန်​မာအင်္ဂလိပ်​အဘိဓာန်​ ပြုစု​ရေးတွင်​ ပါဝင်​​ဆောင်​ရွက်​။ စက်​တင်​ဘာ ၂၆ တွင်​ မြန်​မာသမိုင်​း​ကော်​မရှင်​ အဖွဲ့ဝင်​။
၁၉၉၂၊ ဒီဇင်​ဘာ ၁၄ ... တွင်​ ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​ ​ရှေး​ဟောင်​းသု​တေသနဌာန ဂုဏ်​ထူး​ဆောင်​ ပါ​မောက္ခ။
၁၉၉၆၊ ဇွန်​ ၁ ... တွင်​ ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​ သမိုင်​းဌာန ဂုဏ်​ထူး​ဆောင်​ပါ​မောက္ခအဖြစ်​ ခန်​့အပ်​ခံရ။
၁၉၉၇၊ ဒီဇင်​ဘာမှာ ... "အရင်​ဧကရာဇ်​ အခုလူ" စာအုပ်​ ​ရေးသားထုတ်​​ဝေ။
၂၀၀၀၊ ဇွန်​ ၂၆ မှာ ... ( ၁၁ ) ကြိမ်​​မြောက်​ ဂျပန်​နိုင်​ငံ ဖုကုအိုကအာရှဓ​လေ့ ( ပညာ​ရေးကဏ္႑ ) ဆုရရှိ​ကြောင်​းသိရ၊ စက်​တင်​ဘာ၌ ဂျပန်​နိုင်​ငံ ဖုကုအိုမြို့တွင်​ ယင်​းဆုကို သွား​ရောက်​လက်​ခံ။
၂၀၀၁၊ ဇန်​နဝါရီ ... The 100: A ranking of the most influential persons in history by Michael H. Hart ကို ပြန်​ဆိုသည်​့ "​ကျော်​စွာ ၁၀၀" စာအုပ်​ထုတ်​​ဝေ။
၂၀၀၁၊ ​မေ မှာ ... ကိုယ်​တိုင်​​ရေးအတၳုပ္ပတ္တိ တစ်​စိတ်​တစ်​ပိုင်​းအတွက်​ "ငါ​ပြောချင်​သမျှငါ့အ​ကြောင်​း" စာအုပ်​ ​ရေးသားထုတ်​​ဝေ။
၂၀၀၁၊ ဇွန်​ ၁ ... တွင်​ ရန်​ကုန်​တက္ကသိုလ်​၊ အ​ရှေ့ပိုင်​းပညာဌာန အချ်ိန်​ပိုင်​း ပါ​မောက္ခ။
၂၀၀၃၊ ​မေ ... ယခင်​က အင်္ဂလိပ်​လိုပြုစုထားသည်​့ Research Methodology စာအုပ်​ကို ​ကိုယ်​တိုင်​မြန်​မာလို ပြန်​ဆို၍ "သု​တေသနထုံး" စာအုပ်​ ပြုစုထုတ်​​ဝေခဲ့။
ဘဝတ​စ်​​လျှောက်​လုံး သု​တေသနကိစ္စ ကျမ်​းပြုစု၊ စာ​ရေးစာဖတ်​ကိစ္စတို့ကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်​ခဲ့၊ နယ်​လှည်​့ရာဇဝင်​၊ ဂျပန်​လူမှုတစ်​ရာ၊ လူ​ကျော်​၊ ပုဂံ​ခေတ်​နိုင်​ငံ​ရေးသမိုင်​း၊ ​ထွေ​ထွေရာရာ မြန်​မာသမိုင်​း၊ သမိုင်​းထဲကဒီဇိုင်​း စာအုပ်​များနဲ့ သု​တေသနစာတမ်​းများ၊ သမိုင်​း​ဆိုင်​ရာ​ဆောင်​းပါးများ၊ ကျမ်​းများ၊ ကဗျာ၊ ဝတၳုဘာသာပြန်​များ၊ အများအပြား ​ရေးသားပြုစု ထုတ်​​ဝေခဲ့သည်​။
၂၀၀၅၊ နိုဝင်​ဘာ ၃၀၊ နံနက်​ ၂:၃၀ မှာ မန္တ​လေးကို ​ခေတ္တ​ရောက်​ရှိစဉ်​ နှလုံး​ရောဂါနဲ့​သေတယ်​။ အမရပူရမြို့၊ ​တောင်​သမန်​အင်​းအနီးမှာ ဂူသွင်​းသင်္ဂြိုလ်​တယ်​။ ဇနီး​ဒေါ်ခင်​ရီနဲ့ သားသမီး ၅ ​ယောက်​ ကျန်​ရစ်​တယ်​။
( မှတ်​ချက်​။ ဆရာ့ ဘဝဖြစ်​စဉ်​အကျဉ်​းကို ဆရာ့အကြိုက်​ '​ဆင်​သွားမူ' နဲ့ ​ရေးပါတယ်​။ စာအုပ်​​ဈေးစာအုပ်​တိုက်​ )
[ ပိ​တောက်​ပွင်​့သစ်​မဂ္ဂဇင်​း၊ အမှတ်​ ___ မှ ပြန်​လည်​​ဖော်​ပြသည်​။ ]
သမိုင်​းပညာရှာ ဆရာကြီး​ဒေါက်​တာသန်​းထွန်​း [ ဦးသန်​းထွတ်​ ]
Reference from: facebook